UKUKHANYA: IMYANMAR / IBURMA
Ukuhlaziywa kwemeko kunye nohlalutyo, kunye nokuthatha inyathelo kunye nokuhlaziywa kweendaba zeVidiyo, iindaba zeendaba, iimephu kunye nokuvavanywa kwe-FoRB kunye namalungelo oluntu.
Funda iindaba, izilumkiso, kunye neengxelo ezivela kwiKhomishini yase-US yeNkululeko yeNkolo yeHlabathi (i-USCIRF).
UPDATES: IINDABA ZE-UN FORB
Khangela iwebhusayithi ye-UN kunye ne-ReliefWeb yeendaba zangoku nezembali ezinxulumene ne-FoRB kunye namalungelo oluntu.
IPHULO LOKUGQIBELA: IMYANMAR
Khuthaza ilungu lakho leCongress ukuba lixhase umthetho ofuna urhulumente opheleleyo wase-US kunye nokuphendula kwamazwe aphesheya ukukhulula iinkokheli zaseBurma ezivalelweyo kunye nokuxhasa amaqela enkolo nawobuhlanga ajongene nobundlobongela obuqhubekayo.
Thatha inxaxheba kwimikhankaso yethu okanye wenze eyakho ukuze abenzi bemigaqo-nkqubo eWashington nakwihlabathi liphela beve kubemi-beentshatsheli zenkululeko yamazwe onke yokholo nenkolelo.
ISICWANGCISO-MALI SOMSEBENZI & UQEQESHO
Eli candelo libandakanya izixhobo zokomeleza ifuthe lakho kubhengezo nakwiphulo. Ezi zixhobo zimfutshane zichaza ezona ndlela zilungileyo zesicwangciso, imiyalezo, ukuhlanganisa kunye nokukhuthaza imiba.
IZIXHOBO ZOKWENZA KWI-INTANETHI
Apha unokufikelela kwizibonelelo kunye neqonga olifunayo ukuze ubandakanyeke kwimikhankaso yamanyathelo ekujoliswe kuwo.
1) Izinto ezisisiseko zeFoRB -IzixhoboEzi zixhobo ziya kunceda nabani na onomdla kwinkululeko yezenkolo kwilizwe liphela ukuba afunde malunga nokuba kutheni ibalulekile eluntwini kwaye banokwenza ntoni ukukhusela inkululeko yenkolo kunye nenkolelo yabantu kwihlabathi liphela.
2) Izixhobo zoLuntu lwezeNkoloEzi zixhobo ziya kunceda iinkokheli zokholo ukuba zazi izithintelo ezikhoyo kwinkululeko yezenkolo yamanye amazwe kwaye zijongane nezihloko kwiindawo zabo.
3) Izixhobo zabaPhandi bezeMfundoEzi zixhobo ziya kunceda abafundi bafunde ngenkululeko yamazwe ngamazwe yenkolo kunye namathuba kunye nemibutho eya kuthi ibancede benze umahluko.
4) Izixhobo zabaSebenzi kunye namaGqwethaEzi zixhobo ziya kunceda amatshantliziyo ukuba aqhubeke nokuqonda kunye nokukhuthaza inkululeko yezenkolo kwilizwe labo, kurhulumente, kuzwelonke nakwamanye amazwe.
5) Izixhobo zeNkokheli eziNcinciEzi zixhobo ziya kunceda iinkokheli ezisencinci kwaye zifunde ngenkululeko yezenkolo yamanye amazwe kwaye bafumane amathuba kunye nemibutho eya kuthi ibancede benze umahluko.
6) Izixhobo zabaKhuseli boMthethoEzi zixhobo ziya kuxhobisa amagqwetha okukhuthaza amalungelo oluntu ngezixhobo zophando ezisemthethweni kunye nonxibelelwano lwenethiwekhi ukukhusela amalungelo asisiseko abo bonke.
7) Izixhobo zabaPolisiEzi zixhobo ziya kunceda abenzi bomgaqo-nkqubo ekuqulunqeni imigaqo-nkqubo kunye nezindululo zokuqhubela phambili inkululeko yezenkolo kwilizwe liphela.
Cofa kumfanekiso ongentla ukufikelela kwiThala leencwadi.
Khangela okanye ukhangele kwilayibrari yesiseko solwazi kwimixholo ye-multimedia kunye nemithombo yolwazi ehlelwe ngamacandelo kunye neethegi zemeta.
Uwexuko kunye neMithetho yokuNyelisa
Ukuthintela ubuhlanga kunye nokuthintela ububi
Izinto ezisisiseko kwi-IRF / FORB
Iinkqubo zeSizwe kunye noHlahlelo
Ukutshutshiswa ngokwenkolo kunye noxinzelelo
Amaxhoba kunye namabanjwa
UMGAQO-NKQUBO WASE-US NOMTHETHO
Ikhadi lamanqaku laseMelika laseMelika
Amagqabantshintshi eerekhodi zokuvota zamalungu eNdlu yeeNgwevu yase-US kunye neNdlu yabaMeli yeebhili, izigqibo, kunye nezilungiso ezixhasa inkululeko yezenkolo yamanye amazwe ...
Ngubani ondimelayo kwiNkongolo?
Sebenzisa idilesi yakho okanye ucofe emephini ukufumana iiSenethi zaseMelika kunye noMmeli.
Umsebenzi wangoku kunye nowembali wezomthetho -Khangela iCongress.gov kwaye uphonononge umthetho onxulumene ne-IRF, umsebenzi kunye nabadlali.
I-Senate yase-US kunye neNdlu yeeRekhodi zokuVota ze-IRF
Umthetho we-IRF ka-1998 ubuyela emva
Isikhumbuzo sama-20 se-IRFA sibuyele emva
Esi Sikhumbuzo sama-20 sokuBuyiswa kwakhona komthetho we-IRF wowe-1989 sibuyisela imizamo yentsebenziswano eye yanceda ukuhlanganisa inkululeko yezenkolo kwilizwe lonke kumgaqo-nkqubo wezangaphandle wase-US.
Izixhobo ze-USG FoRB
Khangela umthetho we-US Govt, imigaqo-nkqubo, iikhowudi zomdibaniso, iminyhadala, iingxelo, njl.njl.
Inkululeko yenkolo eAfrika ngokwamazwe
Inkululeko yenkolo e-Asia ngokwelizwe
Inkululeko yenkolo kwilizwe laseYurophu
Inkululeko yenkolo eMzantsi Melika ngelizwe
Inkululeko yenkolo ngokwamazwe
Khangela kwaye uphonononge imigaqo-siseko kazwelonke eyi-197 (leyo iyilwayo kwaye iyasebenza) kwaye uthelekise indlela abakhusela ngayo okanye abathintela i-FORB.
Funda iindibano kunye nezivumelwano zamanye amazwe ezinxulumene neFoRB namanye amalungelo oluntu.
Amanqaku oHlahlelo lweLizwe
Isalathiso seHlabathi seZinto eziNcinci kunye naBemi Bomthonyama (indawo eneenkcukacha ezinokukhangelwa)
Abantu abaphantsi koSongelo (Imephu eSebenzayo)
Amazwe e-USCIRF anenkxalabo eyodwa
I-FORB ngelizwe (Wikipedia)
Vula uLuhlu lweeNdawo zokuBukela kwiHlabathi (2020)
Inkululeko yeNkolo ye-Uyghur
Uwexuko kunye nokunyelisa
Ukubulawa kwabantu ngenkohlakalo kunye nezenzo zenkohlakalo
Unxibelelwano lokukhangela kunye neengxelo zemijikelezo ye-FoRB yengingqi kunye neeforamu.
IRF ROUNDTABLE KWI-INTANETHI
I-Roundtable yeNkolo yeHlabathi yeNkolo isebenzisa iZoom ukubamba iintlanganiso ezibanjwa rhoqo. Kweli candelo unokwenza i-RSVP, ufumane i-Zoom, ufumane ingxaki yokudubula, kunye nokufikelela kwizibonelelo kunye neeflaya ezivela kweli phepha.
IZIGANEKO ZE-IRF ROUNDTABLE (DC)
Ikhalenda kunye nokudweliswa kweziganeko ezizayo zeDC IRF ezijikelezayo.
Le ndawo yokwazisa nge-intanethi, izaliswe zizixhobo zokusebenza kunye nolwazi, inokusetyenziswa ekukhuseleni nasekuqhubeleni phambili inkululeko yehlabathi yenkolo, yokukholelwa, neyesazela.
Yintoni eyenzekayo ngoku
Iphulo leNgqungquthela yaseBurma
Ukukhanya: iMyanmar / Burma
ULUHLU LWEMICIMBI IRF EZAYO
I-IRF Roundtable Events (DC)
Cofa kwikhonkco ukufikelela kwimithombo egciniweyo
Iziseko zeNkululeko yeNkolo: Ezi zixhobo ziya kunceda nabani na onomdla kwinkululeko yonqulo yamazwe ngamazwe ukuba afunde ngesizathu sokuba ibalulekile eluntwini noko anokukwenza ukuze akhusele inkululeko yonqulo neenkolelo zabantu ehlabathini lonke. Cofa ukufikelela amabali avela kwihlabathi liphela, iindlela onokuthi uzibandakanye, kunye namakhonkco okufikelela kwiitafile ezijikelezayo kunye neziganeko. Izixhobo zokufikelela
Uluntu Lwenkolo: Ezi zixhobo ziya kunceda iinkokeli zenkolo ukuba ziqonde imiqobo ekhoyo kwinkululeko yonqulo yamazwe ngamazwe kwaye zijongane nezo zihloko kwiindawo abahlala kuzo. Cofa ukufikelela kumabali, ulwazi ngoonozakuzaku bengingqi abasebenza ngokungadinwayo ukukhuthaza i-IRF, kunye nezixhobo zenkonzo zeenkokeli ukuze babelane noluntu lwabo. Izixhobo zokufikelela
Abaphandi beMfundo: Ezi zixhobo ziya kunceda abafundi bafunde ngenkululeko yonqulo lwamazwe ngamazwe kunye namathuba kunye nemibutho eya kubanceda benze umahluko. Cofa ukufikelela kwiindaba kunye nolwazi malunga ne-IRF, amathuba e-internship, uphando lwezemfundo, kunye nokunye okuninzi. Izixhobo zokufikelela
Amatsha ntliziyo namaGqwetha: Ezi zixhobo ziya kunceda amatsha ntliziyo ukuba aqonde ngakumbi kwaye athethelele inkululeko yonqulo yamazwe ngamazwe kwindawo yabo, kwilizwe, ilizwe, kunye noluntu lwamazwe ngamazwe. Cofa ukufikelela kulwazi malunga nemiba yangoku yenkululeko yonqulo kwihlabathi jikelele, izixhobo zenkxaso, amacebo adlulileyo, kunye neendlela onokuthi uzenzele elakho iphulo lokukhuthaza i-IRF. Izixhobo zokufikelela
Iinkokeli eziselula: Ezi zixhobo ziya kunceda iinkokeli eziselula kwaye zifunde ngenkululeko yonqulo lwamazwe ngamazwe kwaye zifumanise amathuba kunye nemibutho eya kubanceda benze umahluko. Cofa ukufikelela kwiindaba kunye nolwazi malunga ne-IRF, amathuba e-internship, uphando lwezemfundo, kunye nokunye okuninzi. Izixhobo zokufikelela
AbaKhuseli baseMthethweni: Ezi zixhobo ziya kuxhobisa amagqwetha amele amalungelo oluntu ngemithombo yophando lwezomthetho kunye nonxibelelwano lwenethiwekhi ukukhusela amalungelo asisiseko abo bonke. Cofa ukufikelela kwizixhobo zophando kwi-intanethi, uhlaziyo lwe-IRF, ulwazi ngemiba yangoku, kunye nothungelwano lwezomthetho. Izixhobo zokufikelela
Abenzi bepolisi: Ezi zixhobo ziya kunceda abaqulunqi bemigaqo-nkqubo baqulunqe imigaqo-nkqubo nezindululo zokuqhubela phambili inkululeko yonqulo yamazwe ngamazwe. Cofa ukufikelela kuhlahlelo, uhlaziyo lwe-IRF, ulwazi ngemiba yangoku, kunye nendlela onokubandakanyeka ngayo kwi-IRF ngowiso-mthetho kunye nenkxaso. Izixhobo zokufikelela
Funda ngakumbi ngemiba enxulumene nenkululeko yenkolo nenkolo (ForRB).
Lungiselela & Qeqesha
Iinkqubo ezigqwesileyo zothethelelo kunye namaphulo.
Khuthaza kwaye ukhokele utshintsho kwabasemngciphekweni nabacinezelekileyo. Yenza okanye ujoyine iphulo.
Ukusebenzisana Ngesidima Sabo Bonke
I-405 N. Washington Street, i-Suite 300
Icawa yeFalls, VA 22046
Nxibelelana nathi nge-imeyile
IZiko leNkululeko kwi-Intanethi
Amagama ahamba kunye 21
Nikela / Xhasa iZiko leNkululeko
Ilungelo lokushicilela © 2021 21Wilberforce | umthetho wabucala | Imigaqo yokuSebenzisa | Eyilwe ngu iCatalyst CKS
At Twitter I-Facebook-f